Kọmputa | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Esi ewepu Chrome Chọọ: ntụziaka na ntụziaka
Eziokwu ahụ bụ Intanet taa na-eburu ndị ọrụ nke usoro kọmputa kọmputa oge a ọtụtụ egwu, onye ọ bụla maara. Site n'ebe ahụ nje virus na ikpuru, keyloggers na ndị mgbasa ozi, spyware, na ọbụna ndị nchọgharị hijackers. Na otu n'ime ndị a ...
Kedu otu ị ga-esi họrọ laptọọpụ na-egwu egwu dị mma, ma dị ike? Nyocha ndị ọkachamara
Otu laptọọpụ na-akwụ ụgwọ dị egwu bụ echiche nke na-enweghị nkọwa doro anya na nke doro anya, n'ihi na onye ọ bụla na-ere ahịa nke nwere mmasị maka uru nke aka ya na ụlọ ahịa ahụ ga-ekwu na i nwere ọtụtụ ...
Onye na-edozi nje virus: esi achọta na wepu
Nche kọmputa bụ ihe dị mgbagwoju anya. Ọ bụ ndị ọrụ ole na ole na-enwe ike inye usoro a sistemụ arụmọrụ ngwa ngwa ọfụma. Ọtụtụ mgbe, ọnọdụ na-ebilite na kọmputa na-ebute nje virus ...
AMD A8-6410 Nhazi: Ụdị na Nyocha
AMD A8-6410 bu ihe eji eme onu ogugu nke Quad-core nke edobere maka laptops ego. Aha koodu maka ngwaọrụ a bụ Beema. Nkọwapụta AMD A8-6410 CPU nwere ihe ndị a: a na-enye ngwugwu ikpo ọkụ W W 15, ozugbo ...
Mepụta na ịhazi ihe nkesa Minecraft: ntuziaka ndị ọzọ
Ugbu a, ọtụtụ ndị fans nwere mmasị ịtọlite ​​ihe nkesa Minecraft, n'ihi na ọ bụghị onye ọ bụla nwere ihe ịga nke ọma n'ime nke a oge mbụ. Nke a bụ ebe ntuziaka zuru ezu na nsogbu ndị kachasị mkpa na-ebilite n'ọtụtụ ...
Kedu ihe ngbanwe na nhazi? Ihe atụ Ụzọ iji chekwaa ma gbanwee ọnụọgụgụ, ederede na ihe nkiri
Ịrụ ọrụ nke kọmpụta kọmputa maka nhazi data aghọwo ihe dị mkpa n'ime usoro ịkwalite usoro njikwa na atụmatụ. Mana usoro a nke ichikota na nhazi ozi di iche site na ozo, ya mere choro ntughari ...
Asus X200MA - nyocha zuru ezu
Tụlee laptọọpụ nke oge a na-akpọ Asus X200M. Ngwaọrụ a dị ntakịrị ma dịkwa oke nghọta. E nwere ike ịsị ụdị ọrụ nke ngwaọrụ ahụ na ụdị laptọọpụ na-arụ ọrụ. Ejiri Asus X200M ...
Nhọrọ dị iche iche na "GTA: San Andreas" na cops
Iji kwuo na n'egwuregwu nke usoro GTA, ndị uweojii na-enye onye ọkpụkpọ ahụ ọtụtụ ihe nhụsianya bụ ikwu ihe ọ bụla. Ndị uwe ojii na-achịkwa n'okporo ámá mgbe niile, ha na-edebe iwu, ma ọ bụrụ na ị na-eme ...
Egwuregwu Pirates Ahịa: Ndị aghụghọ, Atụmatụ na Nuances
Ụfọdụ ọrụ egwuregwu na-amalitewanye na-adọta uche nke ndị ọrụ netwọk mmekọrịta. N'oge ahụ, e nwere ihe dị ole na ole dị otú ahụ, mgbe ụfọdụ ọ na-esiri ike ikpebi onye ị ga-amalite. Taa anyị ga-emepụta ...
Otu esi eme ọnyà na Minecraft na ihe ọ nwere ike ịbụ?
Ọtụtụ ndị egwuregwu enweghị ike ịghọta ihe ọnyà ndị dị na Minecraft. Ha na-achọ nri niile dịnụ, mana achọtaghị ụdị ọ bụla. N’ezie, enweghị ihe ọ bụla achọpụtara. Ka emechara, ọnyà…
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ: otu esi jikọọ laptọọpụ ngwa ngwa na laptọọpụ, ọ bụghị naanị ...
Mee na-egosi na ọ dị mkpa ka ị jikọọ draịvụ ike nke otu n'ime kọmpụta kọmputa na laptọọpụ ma ọ bụ mmejuputa nke ndị ọzọ na-emekọ ihe ngosi dị oke ọnụ. Ihe ngosi maka nke a nwere ike ịbụ na mberede ma ọ bụ n'ememe ...
Etu esi atụgharị ihe na Sims 4? Etu esi atụgharị ihe na Sims 4?
O yighị ka mmadụ nwere ike ịchọta onye na-amaghị ihe egwuregwu nke usoro Sims dị. Nke a bụ ihe ndu eji enyere gị aka ịnwale ọrụ onye ọzọ, dịrị ndụ maka…
Witcher 3: usoro chọrọ, ụbọchị ịhapụ
Ogwe sitere na CD Project na-enwe ekele dị ukwuu nke ntụkwasị obi n'etiti ndị na-eme egwuregwu na gburugburu ụwa, nke na-adịghị anya inweta ụlọ ọrụ niile. Taa, n'ime omimi nke ulo oru, oru di n'ihu na akpeazu nke akuko ...
Ebee igwu nchịkọta na Zombie Farm? Ugbo Zombie: Nchịkọta nke ụlọ akwụkwọ
Na nso nso a, egwuregwu kọmputa na-adabere na netwọk mmekọrịta nwere nnukwu ewu ewu. Nke a pụtara na ha anaghị achọ nbudata onye ahịa ahụ, mana ndebanye aha na netwọk mmekọrịta, ebe ị ga - emecha ...
Ọnọdụ nke “Liquidation” na “Warface”: Atụmatụ, nzuzo
Ọtụtụ egwuregwu kọmputa na-emekarị enweghị atụmatụ, ha na-elekwasị anya na mmụọ otu, na ikuku nke obodo na ndị enyi na ọgụ na ndị iro. Ya mere, n'ọtụtụ ụzọ egwuregwu dị otú ahụ na-akwụ ụgwọ ...
A rootkit bụ ... Rootkit mmemme. Nje Virus Kaspersky
A pụrụ ịkpọ nje kọmputa usoro ihe omume nke na-arụ ọrụ na nzuzo na-emebi usoro dum ma ọ bụ akụkụ ụfọdụ nke ya. Onye mmemme nke ọ bụla nwere nsogbu a. Ọ dịghị otu onye hapụrụ ...
Otu esi eme Yandex ihe nnweta ọchụchọ ndabere?
Ná mmalite nke mmepe nke "sayensị Ịntanetị" onye ọrụ novice siri ike. N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ihe niile dị ọhụrụ ... Dị ka usoro, onye mbido na-eji Internet Explorer arụnyere n'ime sistemụ arụmọrụ. Site na oge ...
Ntugharị na Minecraft: okike na ngwa
Ndị egwuregwu Novice nwere ike amaghị nke a, mana Minecraft nwere ọtụtụ igwe dị iche iche, nke ọ bụla na-enweghị atụ ma nwee ọrụ nke ya. Ọzọkwa, a na-eji ọtụtụ usoro ọ bụghị ...
Dịka na "Opera" iji gbanwee ihu mmalite. Opera Home Page
Imeghe nchọgharị, onye ọrụ ahụ na-ahụ ụzọ mmalite. E debara adres ya na ntọala. Usoro ọ bụla e mere maka ịlele ebe Ịntanetị nwere ọrụ dị otú ahụ. Nke a bu ihe bu isi maka ndi oru.
Kedu nọmba ICQ: site na ndebanye aha na nkwurịta okwu
N'oge anyị, usoro nkwurịta okwu na - eto ngwa ngwa - ọ na - esiri ike ịkọwa ngwá ọrụ nke nkwurịta okwu na Intaneti ga - achọ, dịka ọmụmaatụ, na otu afọ. Ihe yiri ya na ICQ - ozugbo ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,878.